Sintomy Focke Wulf Fw200 & C4C6 Condor FSX & P3D & FS9
Ny Focke-Wulf Fw 200 Condor Firenena Alemaina fiaramanidina fitaterana mpandeha na entana ao 1938, niova fo an-dranomasina fisafoana fiaramanidina nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Ity fonosana ity dia natao ho an'ny FS2004 sy FSX/P3Dv1V2 +. Vita add-on miaraka amin'ny refy sy feo mahazatra.
Nandritra ny Ady Lehibe II, ny Fw 200 dia ahitsy fa ny tanjon'ny Luftwaffe. Dia tsara indrindra mety amin'ny Reconnaissance asa fitoriana ao amin'ny-dranomasina ho toy ny baomba. Izany dia ampiharina araka ny ekipa miaraka amin'ny submarines. Ny Fw 200, izay anaram-bosotra hoe "loza ny Atlantika" amin'ny Churchill, nihazakazaka am-polony ny Mpiray Dina mpivarotra sambo rehefa nampiasaina ho fisafoana / baomba ny Atlantika mandra-1943.
Personal Fw 200 Condor avy Adolf Hitler, nitondra ny insignia ny Die Fliegerstaffel Fuehrers eo amin'ny orona
Downloads 9 019
Erwin Welker, Shessi, Hauke ​​Keitel, Greg Lalàna